के जाडोमा कोरोना थप फैलन्छ ? |
गृह पृष्‍ठ अन्तर्राष्ट्रिय के जाडोमा कोरोना थप फैलन्छ ?
प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण ३१ , शनिबार २१:११
धरतीको एउटा ठूलो हिस्सामा जाडो बढ्न थालेको छ, यो समय मानिसलाई रुघाखोकी बढी लाग्ने गर्छ। यो पटकको जाडो यामलाई लिएर वैज्ञानिकहरू चिन्तामा छन्। किनकि, जाडोमा कोरोना थप फैलन सक्छ, अर्थात् कोरोनाको दोस्रो तरंग आउन सक्छ।
ह्युमिडिटी जाडोमा कम हुन जाँदा भाइरस हावामा बडी समय टिक्न सक्छ। भाइरस बन्द स्थानमा पनि अधिक समय बाँच्छ। जाडो याममा कोठाहरू बन्द हुन्छन्, त्यसकारण पनि भाइरस बढी फैलने सम्भावना हुन्छ। वैज्ञानिकहरूको विभिन्न अध्ययनले भाइरसको शक्ति बदलिँदो मौसममा निर्भर रहने पुष्टि गरेको छ। तर, प्रयोगशालामा गरिएको अध्ययन बाहिर खुल्ला ठाउँमा नमिल्न पनि सक्छ। तर, के चाहिँ सत्य हो भने, संक्रमण जब लाखौं मानिसमा हुन जान्छ तब त्यसले भयंकर रूप लिन्छ।
पछील्लो पोस्ट धोनीले भारतको स्वान्त्रता दिवसको अवसर पारेर सन्यासको घोषणा
अगिल्लो पोस्ट सुरेश रैनाले पनि गरे संन्यासको घोषणा